China DZ-1000 eqhubekayo abavelisi umatshini vacuum ukupakisha kunye nababoneleli |INCHOI
Uyilo oluzimeleyo olungenamanzi lwebhokisi lokulawula umbane luqinisekisa ukhuseleko lokusetyenziswa kwaye lulungele ukusebenza.Isiphaluka segesi kunye namacandelo okulawula umbane athembekileyo.Isakhiwo esipheleleyo senziwe ngezinto eziphezulu zensimbi ezingenasici ukuze kuqinisekiswe ukusetyenziswa okusisigxina komatshini kwiindawo ezahlukeneyo zokusebenza..
Umatshini wokupakisha oqhubekayo we-vacuum uqulunqwe yikhava ephezulu (igumbi le-vacuum), iqonga elisebenzayo (ibhanti lokuhambisa), isakhelo kunye nokuhanjiswa, izixhobo zombane, inkqubo yokucoca kunye nezinye iindawo.Ipompo yokucoca ifakwe ngaphandle komatshini, kwaye inkqubo yokuhambisa kunye nenkqubo yombane ingaphakathi kweebhokisi kumacala omabini omatshini.
Isigqubuthelo esingaphezulu segumbi lokucoca umatshini wokupakisha we-vacuum oqhubekayo luhlobo lwe-automatic swing cover, olwahlukileyo kwisikhuselo se-automatic ekhohlo nesokunene somatshini wokupakisha wegumbi eliphindwe kabini.Zombini ukutya kunye nokutya kuqhutywa yimoto, enokuqinisekisa ulungelelwaniso kunye nokuchaneka kosulelo.Kwangaxeshanye, oku kunokunciphisa ulawulo lombane, ukwenza ukusebenza komatshini kube lula, kwaye kunciphise kakhulu izinga lokungaphumeleli.
Nangona umatshini wokupakisha we-vacuum unegumbi elinye kuphela, ubungakanani bokutywina yi-1000mm.Igumbi lokucoca linendawo enkulu kwaye linokubeka iimveliso ezininzi ngexesha elinye.Ukuba ubude bebhegi yakho yokupakisha abukho ngaphezu kwe-550mm emva kokuba imveliso ipakishwe, inokupakishwa.Ewe, sinokwenza ngokwezifiso iimodeli ezahlukeneyo ezinje ngomatshini wokupakisha onetywina elinye lokupakisha kunye nomatshini wokupakisha we-vacuum otywiniweyo ophindwe kabini ngokobungakanani bemveliso.Umatshini wokupakisha wokupakisha otywiniweyo ophindwe kabini, ukwenzela ukuba imiqolo emibini yeemveliso ibekwe ngexesha elinye, kwaye ukusebenza kakuhle kwemveliso kuphinda-phindwe kabini kumatshini wokupakisha onetywina elinye.
Inkqubo yolawulo yalo matshini inomsebenzi wenkumbulo.Ukuba kukho inkqubo engakhange iphunyezwe phambi kokuvalwa kokugqibela, inokubangela ukuba igumbi lokusebenza eliphezulu linyukele phezulu, ngoko ke linokuba lihlale ka-3-6 phambi kokupakishwa.
Umatshini wokutywina wokutywina ozenzekelayo wokuTya iZiqhamo kwiVenkile yokutya koLwandle lusetyenziswa kakhulu kwiintlobo ezahlukeneyo zokutya, i-hardware, amayeza, iikhemikhali, iimveliso zasemanzini, amashishini amacandelo e-elektroniki, iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso (eziqinileyo, ezilulwelo, umgubo, intlama) kwi-vacuum-packed. .Inokukhusela imveliso kwi-oxidation okanye i-spoilage ebangelwa ukukhula kwebhaktheriya, ngaloo ndlela ukwandisa ixesha layo leshelufu kunye nexesha lokugcina.
1.Yonke insimbi engenasici yangaphandle kwaye ihlangabezane nemigangatho yezempilo.
I-2.IsiShayina kunye nesiNgesi sokubonisa isikrini sesikrini, enembile kunye nokusebenza okulula.
3.Ukutywinwa kunokuprintwa ngexesha elifanayo ngomhla, inani lelotho.
4.Ingakwazi ukulandela iimfuno zofakelo lwesixhobo esivuthelwayo.
Ubungakanani be-5.Pecial bungenziwa ngokwezifiso.
6.Indawo yokusebenzela izolile, ingxolo ephantsi, ukonga amandla.
1.Ibonakaliswa ngokulungiswa okuzenzekelayo kokucoca, ukutywina, ukuprinta, ukupholisa;
2.Iphaneli yokubonisa isidanga seDijithali;
I-3.Idigri yeVacuum kunye neqondo lokushisa lokutywina linokulungiswa;
I-4.Yenziwe ngokukodwa ngoyilo lwe-arch;
5.I-silicon yokutywina ucingo olunxitywayo olunexesha elide olusetyenziswayo;
6.Iqondo eliphezulu le-vacuum elinomgangatho ogqibeleleyo.
1: Umtshini owenziwe ngentsimbi engenasici, olungele inyama, iisoseji, ukutya kwaselwandle, imifuno yasendle epakishwe ngevacuum imveliso inokumiswa impompo enkulu yangaphandle!
2: Umatshini ujingi ngokuzenzekelayo, umthamo omkhulu wokupakisha, ulungelelwaniso, iJamani ingenisa iimpompo eziyi-160, i-vacuum ephezulu, ubomi benkonzo ende.Impompo yasekhaya eyi-160 nayo inokumiselwa.
3: Lo matshini ufanelekile ngokukodwa kumanqaku okupakisha.Umzekelo: amaqhekeza enyama yenkomo, inkomo ende, i-eel, itshili, impahla, ibhedi, njl.
Ngaphambili: I-DZ600/2S umatshini wokupakisha we-vacuum ozenzekelayo
Okulandelayo: Umatshini wokupakisha wokupakisha we-rotary ozenzekelayo
Umatshini wokuPakisha uKutya kweShishini
Umatshini wokuPakisha weVacuum okrelekrele